मैले बुझेको माओबादी भाग ३
अस्तिको दिन मात्र प्रकाशित बुधबार साप्ताहिकको शिर्षक र समाचार् पढ्दा मैले अहिले सम्म बुझ्दै आएको माओबादी अर्थात दरबारका ठिमाह सन्तान, बारे मेरो धारणा अझ द्रिढ हुंदै गएको जस्तो लाग्यो।
संबिधान सभा भाड्नु को कुनै बिश्वासयोग्य तर्क भेटिएन। हुनै नसक्ने संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने माग राखेर, गणतन्त्रलाई रोक्ने बाहेक अरु कुरामा बल पुर्‍याएको पक्कै छैन। संबिधान सभा जति लम्बियो, त्यति नै दरबार र तिनका मतियार तरवार बलियो हुने र चलखेल गर्न समय मिल्ने हुन्छ।मलाई लाग्छ, संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने सोचको उपज पनि दरबारबाटै भएको हुनु पर्दछ।जसले गरे पनि त्यो माग प्रति संसदिय ब्यबस्था र लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्ने राजनैतिक जमातले स्विकार्ने कुरा होइन। अहिलेको संसदको औचित्य र जनानुमोदनको हैसियत माथि नै प्रश्न उठेको बेला, राज्यब्यबस्थाको मूल खम्बा नि फेर्ने कहाँ सम्म जायज हुन्छ ?जनताको रायको मुल्य कहाँ छ? २०५६ सालको चुनावबाट गठित संसद त नयाँ जनमत लिने बेला भै सक्यो, त्यसमाथि बिना निर्बाचन आएका एक हुल सांसदहरु समेतको संसदले के यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ?
ल, मानि लेउं, संसदबाट गणतन्त्र घोषणा भयो रे? मान्ने कसले? फेरि जनताको छातिमा गोलि हान्ने?छर छिमेकीले मान्नु पर्‍यो नि, अन्तरराष्ट्रिय समाजले पनि अनुमोदन गर्नु पर्‍यो नि। यो कुरा हवलदार भनिएका गिरिजा प्रसादलाई नि थाहा छ, अलिकति राजनिती बुझ्ने हरकोइलाई नि थाहा छ।आन्दोलनबाटै वा सैनिक कारयबाहिबाटै राजतन्त्र नास्न सकेको भए अर्कै कुरा। अब निस्चित नियम र कानूनमा बाँधिएर, लोकतान्त्रिक संस्कारको नाममा जनताको राय नबुझी कदापी त्यस्तो ध्रिष्टता गर्नु मिल्दैन। माओबादिले अत्तो न थापेको भए आजको मिति सम्ममा राजतन्त्रको बैधानिक अन्त्य भैसक्थ्यो। त्यो कुरा कामरेड प्रचण्डलाई नि थाहा थियो, डाक्टर भट्टराइ लाई नि थाह थियो। तर नि चुनाव हुन दिएन, किन? धेरैले माओबादीको चुनावमा हरि बिजोग हुने भएर भन्ने सोचेका होलान्। तर मलाई लाग्छ, तो भन्दा नि दरवार बचाउनु छ।किन कि स्वर्गिय राजा बीरेन्द्र संगको सहकार्य टुटेको छैन। धिरेन्द्रको पत्र सार्बजनिक भएको छैन। न पत्याए बुधबार साप्ताहिकको समाचार पढ्नुस्, त्यो पत्रिका न त मण्डलेहरुको हो न त कांग्रेसीहरुको नै। गोलमेच सम्मेलनको नाममा भएभरको दर्बारियाहरुको भारदारी सभा किन गर्थे? के को लागि गर्थे? सबैलाई चेतना भया।
संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने सोचको उपज पनि दरबारबाटै भएको हुनु पर्दछ ---
यो थ्योरीमा चै दम छ है ।
these maoists areapiece of trash. they smell bad but they are somwhere around the house.
तपाईको "संसदबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने सोचको उपज पनि दरबारबाटै भएको हुनु पर्दछ।" भन्ने वाक्यले साँच्चै सोच्न वाध्य पार्‍यो।
माओबादिको बहुलठ्टी माग र बेला बेलामा आउने कुतर्कका वक्तव्य हेर्दा लाग्छ तपाईको बिस्लेषण १००% सहि छ ।
के हो राजनितींमा जे पनि हुने? हुन त हो कहिले गिरिजा परम शत्रु कहिले परम मित्रु, तर माओबादीको चाल चाही कसैले बुझेको छैन कि जस्तो लाग्छ।